Waa la daabacay27.05.2022
Ka akhriso warbixin faahfaahsan bogga InfoFinland qaybtiisa Takooridda iyo midab-takoorka .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVuokraovi.com
Kiro codsiga gurigaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Markaad ka kireysaneyso shaqsi guri, waxaad la gashaa heshiis kireeyaha. Ka aqriso faahfaahin dheeri ah boga shabakada InfoFinland Heshiiska kirada .
xaq dagganaansho oo la diwaangeliyay,
kaadhka sharciga dagganaanshaha,
sharciga dagganaanshaha oo shaqaynaya ugu yaraan sanad, ama
Haddaad tahay ardey, waxaad codsan kartaa guryaha gaar ahaan loogu talogaley ardeyda. Guryaha ardeyda inta badan waaka raqiisan yihiin guryaha kale. Ka aqriso faahfaahin dheeri ah boga shabakada InfoFinland Degista ardeyga .
Kireysashada guriLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVuokraturva
Macluumaad loogu talagalay kireystahaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaYmpäristöministeriö
Macluumaad ku saabsan degista kiradaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaKuluttajaliitto ry
Hagaha kiradaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Dalka Finland dhexdiisa, qashinka guriga waa in la kala sooco oo lagu shubo mid walba weelka qashinka ee u gaarka ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhri bogga InfoFinland Daryeelka qashinka iyo dib-u-isticmaalida .
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaKuluttajaliitto
La-talinta degistaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPakolaisapu
Xafiisyada gobolka ee Kaalmada qaxootigaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMarttaliitto
Macluumaadka ururka haweenkii soo halgamey (Martta)Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa